Musharixiinta madaxweynaha oo shir uga socdo magaalada Muqdisho – STAR FM SOMALIA
Musharixiinta madaxweynaha oo shir uga socdo magaalada Muqdisho
Waxaa haatan kulan uu kaga socdaa magaalada Muqdisho inka badan 16 musharax oo u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya, kuwaasi oo ka arinsanaya arimaha doorashooyinka.
Musharixiinta ayaa waxay ka arinsanayaan suura galnimada in dib loo dhigo doorashada madaxweynaha Soomaaliya oo maalintii shalay la shaaciyay inay dhaceyso 8 bisha Febraayo ee sanadkaan.
Waxaa musharixiinta shirka ku leh Hotel Jazeera kamid ah Sheekh Shariif Sheekh Axmed, Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, C/qaadir Cosoble, Cumar C/rashiid Cali, C.raxmaan Faroole, C/raxmaan C/shakuur Warsame, Jabriil Ibraahim Cabdulle , Saciid Dani iyo musharixiin kale.
Waxaa musharixiinta inta badan ay soo jeediyeen sida wararka aan ku heleyno in dib loo dhigo doorashada ilaa bisha 20 Febraayo.
Laakiin sida wararka aan ku heleyno waxaa fikradaasi ka hor yimid qaar kale oo kamid ah musharixiinta u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya, waxayna sheegeen inay muhiim tahay in doorashada ay dhacdaa waqtiga loo qorsheeyay.
Waxaa suura gal ah in musharixiinta ay kulankooda kasoo saaraan warsaxaafadeed ay kaga hadlayaan waxyaabaha ay isku raaceen.
Musharixiinta qaar ayaa u muuqda inay wali olalahooda qabyo yihiin oo ay doonayaan inay waqti dheer helaan.
Guddiga doorashada madaxweynaha ayaa shalay soo saaray waqtiga ay dhaceyso doorashada madaxweynaha Soomaaliya.
Madaxweynhii Hore Shariif Sheekh Axmed, ayaa isdiiwaan Galiyey (Daawo Sawirada)